नयाँ रोग : इन्टरनेट एडिक्सन « News of Nepal
डा. विश्वबन्धु शर्मा मानसिक रोग विशेषज्ञ
समय बित्दै जाँदा इन्टरनेटको प्रयोग अझ व्यापक हुने पक्का छ । सामाजिक सञ्जालहरुको दायरा, त्यसको भण्डार र विषयवस्तु पनि व्यापक हुँदै जानेछ । आज नै सामाजिक सञ्जालको कारणले जटिल सामाजिक, आर्थिक र कानुनी समस्या आइसकेका छन् । तर आधुनिक प्रविधिबाट वञ्चित भई विगतमा फर्केर जान पनि मिल्दैन । त्यसैले हामीले आफू र आफ्ना सन्तानलाई इन्टरनेटको प्रयोगलगायत विभिन्न ग्याजेटहरुको पहुँचमा ध्यान दिन जरुरी भइसकेको छ ।
एकजना शिक्षित उद्योगी व्यवसायीको छोरा पढाइमा अब्बल निस्क्यो । उसलाई के पढाउने भन्ने विषयमा परिवारमा लामो विवाद भयो । छोरो कम्प्युटर इन्जिनियर बन्न चाहने यदि त्यो नपाएमा मनोविज्ञान पढ्ने भयो । तर बाबुको चाहनाचाहिँ छोरालाई व्यवस्थापन विषय पढाएर आफ्नो व्यवसायमा सरिक गराउने थियो । लामो विवादपछि बाबुछोराको सम्झौता भयो । शुरुमा कम्प्युटर इन्जिनियरिङ पढ्ने अनि आईटीमा आधारित एमबीए कोर्स गर्ने र अन्त्यमा व्यावसायिक मनोविज्ञान पूरा गर्ने निष्कर्ष निस्कियो । दुवै ‘विन विन’ स्थितिमा पुगे । १२ कक्षामा उत्कृष्ट परिणाम ल्याएकाले छोराले रोजेकै ठाउँमा राखेर पढाउने निर्णय भयो । बाबुले सोचेको थियो– बैंकक रोज्ला वा अमेरिकाको कुनै नामी कलेज छान्ला । तर छोराले भारतको बेङ्ग्लोरमा पढ्ने इच्छा जाहेर गर्यो । बेङ्ग्लोरमा पढ्न गएका धेरैका छोराछोरी पढाइ छोडेर आवाराजस्तो भई बिग्रेका थिए ।
बाबुलाई यो राम्ररी थाहा थियो तर आफ्नो छोरोको पढाइप्रतिको झुकाव र परिपक्व स्वभाव हुनाले उसलाई बेङ्ग्लोर पढ्न पठाउन कुनै हिच्किचाहट भएन । छोरालाई बेङ्ग्लोरको राम्रै आईटी कलेजमा मर्ना गराए । पढाइमा राम्रो सहयोग होस् भनेर छोराले मागेबमोजिम नयाँ मोडेलको ल्यापटप, भर्खरै निस्केको स्मार्ट फोन र ट्याब्लेट पनि किनिदिए । त्यसपछि त छोरालाई २४सै घन्टा कुनै न कुनै ग्याजेट प्रयोग गर्न सहज भयो । छोराले आफ्नो पूरै समय पढाइमा लगाउन सकोस् भन्ने उनको मनसाय थियो । छोरालाई पढाउन एक शिक्षकसँग चिनापर्ची गरी व्यक्तिगत सम्बन्ध पनि स्थापित गरे । छोराको प्रगति कस्तो छ, कतै पढाइमा बेवास्ता गरेर बिग्रन लागेको त छैन ? भनेर बेला–बेलामा ती शिक्षकसँग कुरा गर्थे । राम्रै गरेको भन्ने खबर पाएपछि बाबु ढुक्क भए ।
बेङ्ग्लोरको एक व्यापारी घरानासँग उनको परिवारको पुरानो सम्बन्ध थियो । त्यसलाई पनि उनले नवीकरण गरे । अनि छोराले कहिलेकाहीँ त्यो परिवारलाई भेट्ने प्रबन्ध पनि मिलाए । छुट्टीमा छोरो कहिलेकाहीँ त्यहाँ जाने गथ्र्यो । आफ्नो ग्याजेट लिएर गई पढाइ र काममा व्यस्त देखिन्थ्यो । बाबुले त्यो परिवारबाट पनि सकारात्मक खबर पाएपछि छोराको बारेमा ढुक्क थिए । कलेजको जाँचमा पनि उसले रामै्र नम्बर ल्याउँँदो रहेछ । लामो छुट्टी छैन, पढाइ बिग्रन्छ भनेर घर आउन पनि चाहना गरेन । त्यसलाई पनि बाबुले राम्रो लक्षणको रुप लिए । डेढ वर्ष जतिपछि लामो बिदामा छोरो घरमा आयो । छोराको प्रगतिबाट प्रसन्न भएका बाबुले बिदाको समय रामै्रसँग बिताउन अनेक योजना बनाए । घरमा आएपछि छोराले बुबाआमासँग धेरै घुलमिल गरेन । सामान्य भलाकुसारीबाहेक धेरै संवाद पनि गरेन ।
पुरानो जमानामा कि त पत्रिका, कि कुनै पुस्तक पढिरहेका हुन्थे तर अहिले जताततै के युुवा, के जवान, के पाका सबैजना एकटकले आ–आफ्ना स्मार्ट फोनमा घोेप्टिरहेका हुन्छन् ।
बाबुआमाले सोचे, ‘लामो समयपछि घर आएको, थाकेको पनि होला, आराम गर्ने इच्छा भयो होला ।’ त्यसैले उनीहरुले छोराप्रति त्यति वास्ता गरेनन् । उसले धेरैजसो समय आफ्नै कोठामा बिताउँथ्यो । केही दिनपछि पनि ऊ कोठामैसीमित भएको देख्दा आमाको मनमा अलिकति चिसो पस्यो तर केही बोलिनन् । छेरालाई रमाइलो गराउन बुबाआमा उसलाई लिएर नगरकोट गए । साँझतिर शीतल हावा खान बाबुआमा गार्डेनमा गए तर छोराले त्यता आउन आनाकानी गर्यो । कर गरेपछि आयो तर आफ्नै धुनमा मोबाइलमा व्यस्त देखिन्थ्यो । जतिबेरसम्म उनीहरु गार्डेनमा बसे, छोराले बाबुआमासँग एक शब्द पनि बोलेन र अनुहारमा पनि हेरेन । बोलायो ‘हजुर’ भन्छ, केही प्रस्ताव राख्यो ‘नो थ्यांक्स ड्याड’ भन्छ । बाबुले सोचे, ‘यस्तो के पढाइएछ यो छोरालाई ?
२४सै घन्टा पढी मात्रै रहने, काम गरिरहेने, कम्प्युटर र फाइलमा मात्रै व्यस्त ।’ उनलाई शंका लाग्न थाल्यो । उनी कतै टाढा गएजस्तो गरे । पर गएर फर्की–फर्की आएर छोराको पछाडि थाहा नपाउने गरी उभिएर चियाउन थाले ।
धेरैजसो त उसले इन्टरनेटमा विभिन्न फाइलहरु, कता–कताका तस्वीरहरु तल–माथि स्क्रोल मात्रै गरिरहेको थियोे । एउटै पेज पटक–पटक खोल्दै, हेर्दै गथ्र्यो । बेला–बेलामा फेसबुक पनि खोल्थ्यो तर धेरै बेर त्यसमा घोरिँदैनथ्यो । कानमा इएरफोन लगाएका बेलामा भिडियो गेम खेलिरहेको देखिन्थ्यो । छोराको यस्तो व्यवहार देखेर बाबुलाई मनमा चिसो पस्यो । अब साथीजस्तै व्यवहार गरी उसलाई घुलमिल गराउनुपर्छ भन्ने सोच्दै भने, ‘बाबु ∕ तिमी पनि बियर पिउने हो ?’ उसले छोरालाई पहिलोपटक मदिरा पिउने प्रस्ताव गरेको थियो । यो कुरा सुनेर आमाले झस्किँदै भनिन्, ‘तपाईंले के भन्नुभएको ?’ हुन त बाबु आफैंलाई पनि कस्तो–कस्तो लागेको थियो । तर छोराले बाबुको प्रस्ताव ठाडै इन्कार गर्यो । ‘लौ बियर खान पनि सिकेको रहेनछ’, बाबु दंग परे ।
छोराले बाबुआमासँग अझै गफ पनि गर्दैन । नगरकोटको रमाइलो पनि अनुभव गर्दैन । घोसेमुन्टो लगाएर फोनमा व्यस्त भइरहन्छ । बाबुलाई अलि आश्चर्य लाग्यो, ‘यो कस्तो पढाइ हो कम्प्युटर इन्जिनियरिङको ? खालि फोन, ट्याबलेट मात्रै चलाएर बस्नुपर्ने ।’ अब भने बाबुलाई शंका हुन थाल्यो । बेलुका खान खाने बेलामा खानाको प्लेट एकातिर छ, उसको ध्यान पानीको जगमा अड्याएर राखेको फोनमा छ । ऊ हरेक खानेकुरा अन्दाजले खाइरहेको थियो । उसका आँखा फोनबाट हटिरहेका थिएनन् । बाबुआमाले खाइसक्दा पनि उसले एक–दुई गाँस मात्र खान भ्याएको थियो । छिटो खा भन्दा झर्केर ‘हजुरहरु खाएर जानुस्, म बिस्तारै खान्छु’ भनिदियो ।
यसले बाबुलाई रातभर निद्रा परेन । बेला–बेलामा छोराको कोठाको ढोकामा चियाउन पुग्थे । झ्यालबाट बत्ती बालिरहेकै देखिन्थ्यो । पूरा रात त्यही ट्याबलेट र फोनसँगै बितायो । बिहानपख सुत्यो होला । अबेर उठेर मुख पनि राम्रोसँग नधोई नास्ता खान आयो । त्यतिखेर बाबु एक शब्द पनि बोलेनन् । यो सब व्यस्तता पढाइको लागि होइनरहेछ भन्ने उनले बल्ल बुझे । नगरकोटबाट फर्कंदासमेत बाबुछोरा एक शब्द पनि बोलेनन् । उसका आँखा फोनमा मात्र थिए ।
बाबुले सोचे, ‘यसरी दिनरात नभनी घन्टौं फोनमा टांस्सिएर बस्नु, बाबुआमा र बाहिरी रमाइलोको बेवास्ता गर्नु भनेको पक्कै राम्रो होइन, छोरामा पक्कै केही खराबी हुनुपर्छ ।’ उनले चिनेका अरु पनि कम्प्युटर इन्जिनियर छन् । केही साथीका छोराछोरी पनि त्यहीँ पढ्दै छन् । तर यस्तो त न उनले देखेका थिए, न सुनेका थिए ।
केही न केही समस्या हुनुपर्छ भनेर बाबुले साँझमा छोरालाई बोलाएर कुरा गरे । के कुरामा व्यस्त भएको भनेर उनले सोधे तर छोराले खासै कुरा गर्न चाहेन । उसले ‘केही होइन ड्याड, जस्ट टाइम पास’ भन्यो । बाबुले अलि गम्भीर भएर सोधपुछ गर्न थालेपछि भने उसले आप्mनो बारेमा अलि–अलि बतायो । उसले बताएअनुसार उसको साथमा फोन वा ट्याबलेट भएन कि छटपटी हुन्छ । के गरौं, के गरौं हुन्छ । धेरै बेरसम्म चलाउन पाएन भने टाउको भारी हुन्छ । आँखा चिलाउन थाल्छ । धड्कन बढेजस्तो र सास फुलेजस्तो हुन्छ । तैपनि अभैm धैर्य गरेर आफूलाई रोक्यो भने टाउको बल्किने, हातखुट्टा डोरीले कसेजस्तो अप्ठ्यारो र टाइट भएजस्तो हुने, औंला काँप्ने, उल्टी आउलाजस्तो गरी पेट निमोठिने गर्छ । अनि फोन हातमा लिएर खेलाउन थाल्नासाथ सबै कुरा हटेर हल्का हुने, मनको तनाव स्वतः कम हुने र सबै समस्या आफै ठीक हुने हुँदो रहेछ ।
छोराको कुरा सुनेर बाबु अलमल्लमा परे । नशालु पदार्थमा बानी लागेको व्यक्तिझैँ भएको कुरा छोराले सुनाउँदा उनी निकै चिन्तित भए । उनले आफ्नो चिनेजानेका डाक्टर साथीहरुसँग परामर्श गरे । सबैले यो त एक प्रकारको रोग नैै भएकाले मानसिक रोग विशेषज्ञलाई भेट्न सुझाए । छोरो मानिरहेको थिएन । तर पनि बाबुको करले डाक्टरकहाँ जँचाउन गयो । उसले रोग स्वीकार नगरे पनि आफूलाई अलि बढी नै लत लागेको भन्ने महसुसचाहिँ गरेको थियो । तर ऊ ग्याजेटसँग खेल्न छोड्ने पक्षमा थिएन । डाक्टरले विस्तृत कुरा बुझ्न चाहे पनि छोराले डाक्टरसँग खुल्नै चाहेन । उसले डाक्टरलाई धेरैजसो जवाफ नकारात्मक मात्र दियो ।
छोराको जवाफ, उसले त्यहाँ देखाएको व्यवहार र बाबुले भनेका घटनाहरुका आधारमा साइक्याट्रिस्टले एकैचोटि तीनवटा डायोग्नोसिस सुनाए– इन्टरनेट एडिक्सन, भिडियो गेम डिसर्डर र सोसियल मेडिया अब्सेसन । यी सबै अत्याधुनिक रोेग हुन् । केही समयअगाडि मात्रै यी रोगलाई औपचारिकरुपमा मान्यता दिइएको हो । नितान्त नौलो समस्या भएकाले कस्तो उपचार विधि प्रभावकारी हुन्छ भन्ने पनि निश्चित भएको छैन ।
साइक्याट्रिस्टलाई यो केसमा उपचारको खासै धेरै अनुभव पनि थिएन । केही दिनअघि मात्रै बाबुले आफ्नो निर्णयले घरमा इन्टरनेट बन्द गरिदिँदा फोन फुटालेर झ्यालमा हानी तोडफोड गर्न थालेपछि उनले डाक्टरको परामर्श लिन चाहेका थिए । यस्तो अवस्थामा घरमै राखेर उपचार सम्भव होलाजस्तो त बाबुलाई पनि लागेको थिएन । लागूपदार्थको दुव्र्यसन उपचार गरेजस्तै उसलाई पनि कहीँ भर्ना गराएर बिस्तारै लत छुटाउने कि भन्ने बाबुको सोच थियो । उनले अरु साइक्याट्रिस्टसँग पनि सुझाव मागे । कसैले पनि यो लत यसरी छुटाउने भनेर सल्लाह दिन सकेनन् ।
प्रायः सबैलाई एउटै कुरा अनुभव भइरहेको थियो । जुवाको लत छुटाउन जति गाह्रो हुन्छ, त्यो भन्दा झन् गाह्रो छ यो समस्याबाट मुक्ति दिलाउन । धेरैजसो डाक्टरको एउटै सल्लाह रह्यो– ‘कतै बाहिरतिर यस्तो समस्याको उपचारका लागि कुनै केन्द्र छ कि ? खोजी गर्नुस् ।’ त्यही सल्लाहअनुसार उनले छोरालाई बेङ्ग्लोरमा लगे अनि त्यहाँको एक पुनस्र्थापना केन्द्रमा भर्ना गरे । यो घटना झन्डै ६ महिना जतिअघिको हो । आजसम्म पनि त्यस बिरामीको त्यहाँ उपचार चलिरहेको छ ।
यस लेखमा अहिले मैले आधुनिक प्रविधिको प्र्रयोगबाट उप्पन्न हुने लतमात्रै चर्चा गरेको छु । यस्तो लतबाहेक जथाभावी इन्टरनेट प्रयोग गर्दा, भिडियो गेम खेल्दा अथवा सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय हुँदा हुने कुप्रभावहरु धेरै छन् ।
व्यक्तिको स्वभावमा आउने परिवर्तन, सामाजिक सम्बन्धमा ह्रास, दृष्टि कमजोर, शारीरिक स्वास्थ्यमा पर्ने अरु प्रतिकूल असर, मित्रहरुबीच र परिवारभित्रै पनि असमझदारी हुने, गलत व्यक्ति वा समूहबाट हुन सक्ने खतरा आदि त केही उदाहरण मात्रै हुन् । समय बित्दै जाँदा इन्टरनेटको प्रयोग अझ व्यापक हुने पक्का छ । सामाजिक सञ्जालहरुको दायरा, त्यसको भण्डार र विषयवस्तु पनि व्यापक हुँदै जानेछ । आज नै सामाजिक सञ्जालको कारणले जटिल सामाजिक, आर्थिक र कानुनी समस्या आइसकेका छन् । तर आधुनिक प्रविधिबाट वञ्चित भई विगतमा फर्केर जान पनि मिल्दैन । त्यसैले हामीले आफू र आफ्ना सन्तानलाई इन्टरनेटको प्रयोगलगायत विभिन्न ग्याजेटहरुको पहुँचमा ध्यान दिन जरुरी भइसकेको छ ।
२०४० को दशकमा नेपालमा विभिन्न प्रकारको लागूपदार्थको व्यापक दुरुपयोग शुरु भयो । छोरो ढिला घर आयो वा कसैसँग टेलिफोनमा लामो कुरा गरिरहेको छ भने बाबुआमाको मनमा चिसो पसिहाल्थ्यो । हुन पनि तिनताका हिरोइन, ब्राउन सुगर, ह्वाइट सुगरको दुव्र्यसन एक महामारीजस्तै भएको थियो । सबैभन्दा दुःखको कुरा त त्यस्ता दुव्र्यसनीलाई उपचार गरी दुव्र्यसन छुटाएपछि पनि फेरि त्यही लतमा फर्कने समस्या आउँथ्यो । ठीक त्यसै गरी आज घर–घरमा स्मार्टफोन बोक्ने कलेजका छात्रछात्राहरु बाबुआमासँग वा आफन्तसँग मात्र हैन आफ्नै दौंतरी युवाहरुसँग पनि संवाद गर्दैनन् । यस्तो अवस्था हामीकहाँ मात्र हैन, संसारभरि व्याप्त छ ।
स्मार्टफोन बोक्ने कलेजका छात्रछात्राहरु बाबुआमासँग वा आफन्तसँग मात्र हैन आफ्नै दौंतरी युवाहरुसँग पनि संवाद गर्दैनन् । यस्तो अवस्था हामीकहाँ मात्र हैन, संसारभरि व्याप्त छ ।
पुरानो जमानामा युरोप–अमेरिकातिर जाँदा बस या मेट्रोमा लामो यात्रा गर्नेहरु कि त पत्रिका, कि कुनै पुस्तक पढिरहेका हुन्थे, त्यसै गरी पार्कतिर ज्येष्ठ नागरिकहरु बडो आनन्दसँग गफ गरिरहेका देखिन्थे । तर अहिले त्यहाँका मेट्रो, बसपार्क, होटलका लबी जताततै के युुवा, के जवान, के पाका सबैजना एकटकले आ–आफ्ना स्मार्ट फोनमा घोेप्टिरहेका हुन्छन् । यस्तो दैनिकीको असरबारे व्यापक छलफल भइरहेको छ, लेखहरु छापिएका छन्, टिभी–सामाजिक सञ्जालमै नाकारात्मकरुपमा प्रस्तुत भइरहेका छन् । तर त्यही बानीबाट एकप्रकारले लत नै पनि लाग्दो रहेछ । युवा विद्यार्थीमा त्यस्तो लत लागेपछि पढाइ त बिग्रने नै भयो, साथै व्यक्ति पनि बिग्रने खतरा हुन्छ । समयमै सचेत बनौं, आधुनिक प्रविधिको सन्तुलित र संयमितरुपमा प्रयोग गरौं ।